XO-505 Yakamira Wiricheya w / Multiple Power Mabasa
×	 S-ERGO 115 - 25 lbs	1 × $665.00
musha / chitoro / Chinyorwa Wiricheya / Wiricheya yemagetsi
View ngoro "S-ERGO 115 - 25 lbs" yakawedzerwa kungoro yako.
XO-505 Yakamira Wiricheya
CHETE: Ichi chigadzirwa chinogona kungotengwa chete parunhare, ndokumbira utipe runhare kuti tigamuchire rumwe ruzivo, 626-581-2235 kana
Karman Healthcare inopa yekupedzisira yakamira mudziyo wako wekufamba zvaunoda. Iyi simuka wiricheya haisi yako chaiyo yekumira cheya, ndiyo yakazara pasuru kana zvasvika kumagetsi emacheya. Iyo ine hofisi nyowani dhizaini yakachena uye iri nyore kufambisa. Inouya neiyo mamiriro ehunyanzvi LCD inoratidzira iyo inobvumidza iwe izere kutonga kweese maficha akaverengerwa. Ichi chigaro chakavakwa chakaomarara, chine simba rakaringana uye torque yekufamba nenzira dzakaipisisa dzekunze dzaungasangana nadzo.
YAKADZIDZISWA NENYENZO 4.6 PASI WHEELCHAIR INSTITUTE
The Karman XO-505 Magetsi Akamira Wiricheya iri pamusoro pemutsara, kucheka wiricheya yemagetsi wheelchair iyo inogona kuzviita zvese, inopihwa nengano muindastiri. Yakakurudzirwa chero munhu anoda yakazara-inoratidzirwa yemagetsi wheelchair iyo zvakare inopa kusimuka-kugona kugona… chero iwe uchikwanisa kuitenga. Iwe unotambura nenyaya yekufamba yakakomba zvakakwana zvekuti unoda rubatsiro kusimuka? Wanga uchitsvaga yakasimba, izere-inoratidzirwa wheelchair yemagetsi inogona kuita zvese, kusanganisira kukupa iwe otomatiki rubatsiro kuti uwane tsoka dzako pasi pako?
Kana iwe ukapindura hongu kune mumwe wemibvunzo iyoyo, saka urikuda kwedu kuongororwa kwakadzama kweKarman XO-505 wiricheya. Ichi chinhu chakanakisa chekufambisa chinokwanisa kuzviita zvese. Iyo yekucheka-kumucheto tekinoroji yakatora kukudzwa kwepamusoro mune yedu yazvino roundup ongororo yeakanakisa mawiricheya evakuru.
Kugadziriswa & Nyaradzo
Nezve kugadziriswa, iwe unowana zvakawanda zvekuda pano. Zvigaro zvakawandisa pamusika nhasi zvinopa imwe kana mbiri sarudzo dzekugadzirisa, kazhinji iko iko kukwirira kwenzvimbo dzechigaro uye kureba kwetsoka.
Izvo hazvisi zvachose kana iyo Karman XO-505 wheelchair ine chekuita. Zvakanaka zvinhu zvese zvinogadziriswa. Sezvambotaurwa pamusoro apa, unogona kuraira chigaro nechimwe chezvitatu zvakasiyana pakadzika zvigaro uye maviri akasarudzika zvigaro zvehupamhi zvigaro.
Hazvigumire ipapo zvakadaro; unogona zvakare kugadzirisa:
Kureba kweshure kumashure
Kwese kukwirira uye kona yenguva yetsoka
Uye kukwirira kwemarestrests
Chaizvoizvo, pane zvakakwana zvekugadzirisa zvakanaka zvaunogona kupa pano kuti iwe unogona kugadzirisa chigaro kuti chikwanise zvakakwana kwauri.
Kunyaradza-kuchenjera, iwe zvakare uchawana zvakawanda zvekuda. Iyo Karman XO-505 Yakamira Wiricheya inopa zvinoshamisa kusununguka ndangariro furo padding mune zvese chigaro uye chigaro kumashure. Vashoma mavhiripu aregenuinelycomfy yekugara kwenguva refu, asi ichi ndicho chimwe chazvo. Haisi chigaro chakakura chekurara, uye ichiri chisina kugadzikana senge yakaremerwa recliner, asi iwe unenge usina kana dambudziko kugara mukati maro kwezuva rakawanda kana uchida.
Kukura kwechigaro *
Sarudza chisarudzo ... 18 "
Chigaro Kudzika *
Sarudza chisarudzo ... 18 " 19 " 20 "
Chikafu Tray (+$450.00)
Asiri Slip Surface yeiyo Footrests (+$90.00)
SKU: XO-505 Categories: Wiricheya yemagetsi, Simba Mawiricheya, Kumira Wiricheya Tags: wheelchair isina mwero, wiricheya, mavhiripu
Ichi chigaro chakanakira kushandiswa kwemukati nekunze, iyo yepakati vhiri dhiraivhu inobvumira chigaro kuve nenzvimbo yakavandudzwa yegiravhiti, nepo mavhiri ekumberi nekumashure achigadzira muyero wakaringana wemushandisi paunenge uchiita shanduko pameso.
Kana zvasvika pamidziyo yakamira, chigaro ichi chiri pamusoro peketani yechikafu. Iyo inouya yakajairwa nepakati vhiri dhiraivha, kuzara kugara kumira simba mashandiro, simba kutsamira nekusimudza legrest, yakazara kutonga kuratidza, ergonomic gumbo zororo rutsigiro cushion, inowedzerwa ruoko rutsigiro, yakazara rutsigiro harness, uye nyowani simba hydraulic system.
Muenzaniso: XO-505 Mira-Up hwiricheya
6061 T-6 Ndege-giredhi Aluminium Puremu
Yakazara kutonga LCD kuratidza
Yakazara gumbo zororo rutsigiro pamutsago
Yakawedzerwa ruoko / ruoko rutsigiro mabara pamativi ese
H-chimiro Chest harness
Dual kumberi mwenje mwenje (Luxury Model)
Kumashure maviri emwenje mwenje w / kupenya chimiro (Luxury Model)
Nyowani inowaniswa hydraulic system
Yakazara saizi pamberi pekudya tireyi (Inesarudzo)
Range paCharge: ~ 25 Maira
Nyore Kushandisa Joystick YeDrive & Mira
Tsigiro yeUSB yemidziyo nhare (sarudzo)
Kumashure caster mavhiri
Simba Yakatsamira Feature
simba Tilting mamiriro
Mid vhiri dhiraivha
Yakazara kugara kumira simba basa
Chigaro Kudzika 18/19/20 padiki.
Kureba Kureba 25 padiki.
Kunopindirana Kureba 56.5 padiki. w / Headrest (46.6 inch isina Headrest)
Akazara murefu 28 padiki.
Overall Length 45 padiki.
Kurema Kurera 298 lbs.
Kutendeuka Radius 25 madigiri
Ground clearance 2 padiki.
Kutumira Kukura 48, L x 40, H x 52, W
XO-505 Imire hwiricheya UPC #
50 lbs kana zvimwe
250 makirogiramu - 300 lbs